Maayer Naftiisa Halis U Galiyay Badbaadinta Jaarkiisa Oo Dab Qabsaday Gurigooda | Hawraar
October 14, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Maayer Naftiisa Halis U Galiyay Badbaadinta Jaarkiisa Oo Dab Qabsaday Gurigooda
Maayerka Degaanka Newark ee la jaarka ah magaalada New York ayaa warbaahinta u sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay, dhaawaca iyo dhibaato kasta oo soo gaadhay, mar haddii uu ku guulaystay inuu badbaadiyo jaarkiisa oo gurigooda dab qabsaday xili habeenimo ah.
Maayerkan oo lagu magacaabo Corey Booker, waxa kale oo uu ku gacan saydhay in loogu yeedho geesi, isaga oo sheegay in hawsha uu qabtay ay ahayd waajib muwaadinimo oo saaran, xaqna loogu lahaa inuu ku kaco.
Maayarkan oo 43-jir ah ayaa arkay guri xaafadiisa u dhow oo dab qabsaday, ka dibna waxa uu u dhaqaaqay in dad ku dhex jiray guriga uu badbaadiyo, dabkan ayaa ahaa mid si wayn u qabsaday guriga, waxaana maayarkan ay isku dhaceen ilaaladiisi iyo dad meesha ku sugnaa oo u diiday ama ka codsaday in aanu naftiisa halis u galin, hasa yeeshee waxa uu go’aansaday in uu dabka isku dhex tuuro, ka dibna wuxuu ku guulaystay wixii uu u socday.
Ninkan guddoomiyaha ka ah Newark waxa uu dabka isugu tuuray ka dib markii uu ka dhex maqlay qof guriga ka dhex qaylinaya oo haween ah, ninkan ayaa isku dhex tuuray, waxaanu dhex qaaday gurigii olalayay, waxa uu warbaahinta u sheegay in meel dabku xoog uga kacay uu ku beegmay ka dibna uu dareemay xaalad argagax leh, waxa uu sheegay in uu u maleeyay in dhimashadiisi uu soo doontay.
Hasa yeeshee waxa uu xusay in markii uu b
aadh baadhay gurigii uu la kulmay haweenaydan oo gidaar qiiq madoobi haysto dabkuna dhan walba kaga soo socdo ka dhex qaylinaysa, waxa uu haweenaydaas ku qaaday dhabarka oo inta uu xanbaaray ayuu dabka la soo dhex qaaday isagoo ku guulaystay inuu dibada uga soo saaro.
Markii uu xaaladaa badbaadinta ah dhameeyay ayaa waxa goobta yimi, dab damiskii iyo kooxihii gurmadka deg deg ah, waxaana dadkii cusbitaalka loola cararay ka mid noqday isla maayarka oo gacanta midib iyo meelo ka mid ah lugaha uu dhaawacii dabku ka soo gaadhay.
Masuulkan ayaa sheegay in xaaladiisu aad u fiican tahay, waxa kale oo uu si wayn u amaanay dadka dabka damiya iyo kooxaha gurmadka deg deg ah oo uu ku tilmaamay geesiyaal u badheedhay inay shacbiga ka qaabilaan hawl adag oo sida uu xusay daqiiqado yar oo uu wax ka arkay uu ku dareemay dhibta iyo halista ay leedahay hawsha ay qabtaan.
Talaabadan geesinimada leh uu ku talaabsaday Maayerkaasi ayaa ah mid mudan bogaadin sida ay warbaahinta dalkiisu sheegtay, isla markaana u baahan in lagaga daydo.